DEG DEG+DAAWO: Puntland & Faderaalka oo ku kala kacay shir uga socday Muqdisho iyo mashaariic laysku haysto. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Puntland iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa isku mari waayay kulan ka socday magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlayay arrimaha ku saabsan mashaariic horumarineed oo dhanka caafimaadka ah, oo ay Xukuumadda Faderaalku doonayso in ay lawareegto masuuliyadooda.
Puntland ayaa sheegtay in mashruucan ay 10-kii sanno ee lasoo dhaafay soo maamulayeen, isla markaasna si wanaagsan loo maamulay maantana sii maamulidiisa ay xaq dhankooda u leeyihiin oo aysan yeeli doonin damaca dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Dawladda Faderaalka ayaa doonaysa in ay mashruucan la wareegto maamulidiisa, oo laga saaro gacanta Puntland, waxana ka dhashay dood xoog badan oo gaartay in kulanka lagu kala tago, isagoo aan waxba natiijo ah ka soo bixin.
HALKAN RIIX SI AAD U DAAWATO MUUQAALKA SHIRKA AMA HOOS KA DAAWO
Aniga oo in dhawaale isku la maqnaa fajaca iyo filan waaga ay ii la muuqatay in ay Madoobe iyo Deni shirqoolka Madaxwyene Farmaajo ku lug leeyihiin ayay hadda xisaabtu isugu kay qabatay.
Waxaa maankayga deeqi waayay in ay Madoobe iyo Deni ka dhiidhiyi waayeen oo garab, gaashaan iyo gabbood ba u noqon waayeen Farmaajo oo bahdilaad xun iyo boqona goyn xaq daro ah Xamar lagaga hayo.
Markii se ay caddaatay in uu Xassan Gurgurte sheekada ku jiro ayay xisaabtu isugu kay qabatay oo ay ii caddaatay in xarakadii Damul Jadiid ay dalka ku soo laba kacleysay oo uu inqilaab qaboow oo xarakadan salka ku haya dalka ka hirgalayo.
Madoobe + Deni + Gurgurte = Al-Islaax (Damul Jadiid).
Puntland way gacan gashay runtii.
waxa so labtay Cismaan Cawad oo in mudo ah Baraha bulshada kamaqana,Cismaan Cawad waxa lagu yiqiin nin hadal cad oo aan cad sarayn shega kana duwan dhalinta baraha bulshada wax kuqara,Hadase waxuu la sonoqday wax aan loga baran,waxuu canaan kala duldhacay Danni & Axmed madobe asagoo uxaglinaya in Farmajo Qabiila ka shanqariyey,mr.Cawad waxuu baalmaray waxyabaha khaladadka ah oo Xukumada Muqdisho ka geysatay wadanka mudadi aay jirtay,waxii lagu sameyey Abdikariin Qalbidhagax,tii kuxigtey siyasi A.A shakuur Xarig & dil 6 Qof oo shaqale & askar isugu jira maxakabad, senetar Qaybdiid taas mid lamid ah,maxa lagu sameyey sheikh mansuur cali robow oo inta lacafiyey oo layiri xor bad tahay Jeelka ladhigay oo wali iska xiran taas oo Qaynunka ka baxsan,waxay shaqada ka Cayriyen wakilkii UN. somaliya oo hader dhibato ka tagan tahay dhaqalihi UN bixin jireen lagostay oo shaqadi melkasta dhibato dhaqale kajiro,waxad ka warqabta in dhaman D,gobaledyada somalida faraganlin Qawan lagu hayo oo xukumadu burburinayso waxii somaliya ku heshisay oo ahayd fadaral,waxad kawarqabta in gogol lo dhigay dhamaan 5 D,gobaled & xukmada muqdisho magalada garoowe oo lagu heshiyey in fadhi kale uu ku baqay madaxweyne Danni oo balantii xukumadda muqdisho ganafka ku dhufatay.